Kanye nokufika kwalolo isizini ihlobo phambi kowesifazane ababemvakashele uvuka inselele - indlela pasteurize amathini ukuze ngenkuthalo wenza izikhala agcinwayo ukunambitheka yayo yasekuqaleni futhi izakhiwo yokudla okunempilo kulo ebusika. Kufanele kuqashelwe ukuthi akudingeki ukuba uthathe noma amakilasi ukupheka ukufunda lesi isayensi, kusukela zonke izenzo ezenziwe ngesikhathi senqubo, itholakala Wabasaqalayo in kwemvelo. Ngezansi izifundo ezimfushane ukuthi kuzokuvumela ukufunda indlela pasteurize namakani ngaphandle izikhala.
Okokuqala udinga ukuqinisekisa ukuthi zonke ingilazi yakho iziqukathi okulungiselelwe yokugcina ukulondolozwa, uhlanzekile kakhulu futhi ngempela integers. Ungasebenzisi izikhala ebusika aqhephukile womkhiqizo, njengoba lokhu kungaholela nemiphumela eyingozi, isibonelo, hit sengilazi ukudla. Ngaphezu kwalokho, uma unentshisekelo ngempela impendulo yombuzo indlela pasteurize amathini, cishe uyazi ukuthi umusi isetshenziswa, izinga lokushisa lapho impela high salokhu inqubo. Imifantu futhi igawula phezu kungaholela ekubhujisweni isakhiwo esitsheni, okwakuyoholela futhi kuhilelani nemiphumela ebuhlungu efomini imvuthuluka.
Izindlela ezivame kakhulu
Indlela elula of pasteurization kubhekwa ukuba oqondile obdavanie umthamo isikebhe, igqoke embizeni. Yiqiniso, amanzi embizeni kumele igcinwe abilayo. Ubude inqubo isikhathi akuyona imizuzu engaphezu kuka-nanhlanu. Nokho, iphuzu elilodwa kubalulekile ukukhumbula - ngaphambi kokufaka embizeni kwi itjhubhu teapot ngamanzi abilayo, kudingeke ukuba amanzi abilayo uthele phezu ingilazi iziqukathi ukugwema ukwehluleka kwesakhiwo ngenxa ukwanda kokutheleleka kudlange kakhulu lokushisa. Kukhona indlela elula ngawo ungafunda indlela pasteurize namakani ekhaya. Ingabe kudingeka uthele abilayo esitsheni futhi uthele amanzi ashisayo imizuzu emithathu, phakathi kwesikhathi lapho kufanele uqale lokuhlanzisisa ofeleba ngamanzi abilayo. Ngemva umphumela imizuzu amathathu, amanzi kumelwe likhishelwe, futhi aqhubeke ngokushesha ukugcwalisa namakani okuqukethwe.
Izindlela ku-microwave kanye kuhhavini
Nokho, iningi emizi ezibosolwazi e ugingqe of izikhala, ngokuqinisekile uncamela ngaphezulu izindlela nokuqeqeshwa professional. Ngokwesibonelo, indlela kunalokho ezithakazelisayo sokupha izincomo ngokuthi pasteurize namakani ku-microwave, uma une Imishini enjalo. Ukuze wenze lokhu, wageza ngokucophelela ingilazi iziqukathi e ezimanzi kufanele bafake kuhovini uyivule kuqhuma egcwele. Tara uzolunga uma wawusomile. Futhi, thina elikweluleka sinake indlela echaza indlela pasteurize namakani kuhhavini, uma ikhishi lakho abakwazi ukuqhosha-microwave oven. iziqukathi Bahlanza kufanele ibekwe ngaphakathi kuhhavini wakho sibheke phansi, isitofu kumele kube abandayo. Ngaphezu kwalokho, kufanele isethwe degrees 150 Ukushisa nangemva Ukushisa kudingeke baqhube amathini ngaphakathi imizuzu eyishumi nanhlanu. I kwaphumela pasteurized ingilazi esitsheni ukuze usetshenziselwe kweqa up ngokushesha.
Coloured lens Neo Cosmo: bheka ku umphefumulo futhi eshaya iso!